လကျရှိ အခွအေနတှေအေား နိုငျငံတကာ မှ သိရှိစရေနျ လူမှုကှနျယကျတှကေနေ တဈဆငျ့ တိုငျကွား နရေတဲ့ သူမရဲ့အဖွဈကို ပွောပွလာတဲ့ ပိုငျဖွိုးသု – GaMone Media
Homepage / Celebrity / လကျရှိ အခွအေနတှေအေား နိုငျငံတကာ မှ သိရှိစရေနျ လူမှုကှနျယကျတှကေနေ တဈဆငျ့ တိုငျကွား နရေတဲ့ သူမရဲ့အဖွဈကို ပွောပွလာတဲ့ ပိုငျဖွိုးသု
လကျရှိ အခွအေနတှေအေား နိုငျငံတကာ မှ သိရှိစရေနျ လူမှုကှနျယကျတှကေနေ တဈဆငျ့ တိုငျကွား နရေတဲ့ သူမရဲ့အဖွဈကို ပွောပွလာတဲ့ ပိုငျဖွိုးသု
By Ga MonePosted on March 21, 2021
သရုပျဆောငျ ပိုငျဖွိုးသုကတော့ ဆယျစုနှဈကြျောတိုငျအောငျ ပရိသတျတှေ ခဈြခငျ အားပေးနရေတဲ့ မငျးသမီးတဈလကျ ဖွဈပါတယျ။ ဖဖေျောဝါရီလအစကတညျးမှစပွီး ပွညျသူတှနေဲ့အတူ လူထုလှုပျရှားမှုမြားတှငျ တကျကွှစှာ ပူးပေါငျးပါဝငျနတောလညျး ဖွဈပါတယျ။ အမှနျတရားဘကျကနေ မားမား မတျမတျရပျတညျနသေူ တဈဦး ဖွဈတာကွောငျ့လညျး အားလုံးက ခြီးကြူးနကွေတာပါ။
ပိုငျဖွိုးသုကတော့ လကျရှိ အခွအေနတှေကွေောငျ့ တိမျးရှောငျ နရေပမေယျ့လညျး သူမရဲ့ လူမှု ကှနျယကျစာမကျြနှာမှတဈဆငျ့ အဖမျးဆီးခံထားရတဲ့ ကြောငျးသား၊ကြောငျးသူတှအေတှကျ speak out လုပျပေးနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ Twitter ကနလေညျး နိုငျငံတကာ မှ မွနျမာနိုငျငံတှငျ နစေ့ဉျဖွဈပကျြနတေဲ့အကွောငျးအရာတှကေို သိရှိနိုငျအောငျ တငျပေးနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ မကွာသေးခငျ မိနဈပိုငျးလောကျကလညျး ပိုငျဖွိုးသုရဲ့Facebook အကောငျ့တှငျ လကျရှိအခွအေနတှေကွေောငျ့ အတိုငျအတောထူနရေတဲ့ သူမ ရဲ့အကွောငျးကို ရေးသားထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
” ငါလညျးအရမျးအတိုငျအတောထူတဲ့ဟာမကွီးဖွဈနပွေီ…. TTC ကသူငယျခငျြးတှအေသိဆုံး…ငယျငယျကဘယျလောကျတိုငျတာ တောတာဝါသနာမပါမှနျး…😬 အသငျးသားတှတေံမွကျစညျးဘယျသူမှမလှဲလညျး .တဈယောကျတညျးလှညျးခဲ့ပွီး ဆရာမကအသငျးခေါငျးဆောငျမို့ စာမေးခိုငျးရငျလညျး စာလာ ဆိုတဲ့လူတိုငျး သူမအား ဘယျလောကျမြားတလေးတစားရှိသလဲဆို *$&@ဖွဈပါသညျ +’”*##@ဖွဈပါသညျ..နဲ့ ဖွဈပါသညျတဈကွောငျးပဲဆိုဆိုသှားကွကွောငျးနဲ့ ဆရာမမှ အသငျးသား‌တှစောရလားမေးရငျ ဟုတျတီခယျြ ရတယျပဲဖွခေဲ့တာပဲ ဖွဈပွီး ကိုယျတိုငျလညျး အတိုငျ အတောမထူပဲ ဆရာမအားသှားတိုငျတဲ့သူတှကေိုလညျး အမွငျကတျခဲ့ကွောငျး ရေးသားထားတာပါ။ လကျရှိအခြိနျမှာတော့ Twitterမှာတိုငျလိုကျ …e-mailနဲ့တိုငျလိုကျ…Signalကနတေိုငျလိုကျ…တိုငျလို့ရသမြှနရောပတျတိုငျနတော… အရမျးကိုအတိုငျအတောထူသူကွီးဖွဈနပွေီ…” ဆိုပွီး သူမရဲ့ ပုံပနျးသဏ်ဍနျကို ကှကျကှကျကှငျးကှငျးမွငျအောငျ ရေးပွထားတာဖွဈလို့ ပရိသတျတှလေညျး သိရှိနိုငျအောငျ ဒီသတငျးလေးကို တဈဆငျ့ပွနျလညျ ကူးယူတငျဆကျပေးလိုကျ ရပါတယျနျော။
Source and Photo Crd-Paing Phyoe Thu’s Facebook Account
သရုပ်ဆောင် ပိုင်ဖြိုးသုကတော့ ဆယ်စုနှစ်ကျော်တိုင်အောင် ပရိသတ်တွေ ချစ်ခင် အားပေးနေရတဲ့ မင်းသမီးတစ်လက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီလအစကတည်းမှစပြီး ပြည်သူတွေနဲ့အတူ လူထုလှုပ်ရှားမှုများတွင် တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းပါဝင်နေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်တရားဘက်ကနေ မားမား မတ်မတ်ရပ်တည်နေသူ တစ်ဦး ဖြစ်တာကြောင့်လည်း အားလုံးက ချီးကျူးနေကြတာပါ။
ပိုင်ဖြိုးသုကတော့ လက်ရှိ အခြေအနေတွေကြောင့် တိမ်းရှောင် နေရပေမယ့်လည်း သူမရဲ့ လူမှု ကွန်ယက်စာမျက်နှာမှတစ်ဆင့် အဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူတွေအတွက် speak out လုပ်ပေးနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Twitter ကနေလည်း နိုင်ငံတကာ မှ မြန်မာနိုင်ငံတွင် နေ့စဉ်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို သိရှိနိုင်အောင် တင်ပေးနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးခင် မိနစ်ပိုင်းလောက်ကလည်း ပိုင်ဖြိုးသုရဲ့Facebook အကောင့်တွင် လက်ရှိအခြေအနေတွေကြောင့် အတိုင်အတောထူနေရတဲ့ သူမ ရဲ့အကြောင်းကို ရေးသားထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
” ငါလည်းအရမ်းအတိုင်အတောထူတဲ့ဟာမကြီးဖြစ်နေပြီ…. TTC ကသူငယ်ချင်းတွေအသိဆုံး…ငယ်ငယ်ကဘယ်လောက်တိုင်တာ တောတာဝါသနာမပါမှန်း…😬 အသင်းသားတွေတံမြက်စည်းဘယ်သူမှမလှဲလည်း .တစ်ယောက်တည်းလှည်းခဲ့ပြီး ဆရာမကအသင်းခေါင်းဆောင်မို့ စာမေးခိုင်းရင်လည်း စာလာ ဆိုတဲ့လူတိုင်း သူမအား ဘယ်လောက်များတလေးတစားရှိသလဲဆို *$&@ဖြစ်ပါသည် +’”*##@ဖြစ်ပါသည်..နဲ့ ဖြစ်ပါသည်တစ်ကြောင်းပဲဆိုဆိုသွားကြကြောင်းနဲ့ ဆရာမမှ အသင်းသား‌တွေစာရလားမေးရင် ဟုတ်တီချယ် ရတယ်ပဲဖြေခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပြီး ကိုယ်တိုင်လည်း အတိုင် အတောမထူပဲ ဆရာမအားသွားတိုင်တဲ့သူတွေကိုလည်း အမြင်ကတ်ခဲ့ကြောင်း ရေးသားထားတာပါ။ လက်ရှိအချိန်မှာတော့ Twitterမှာတိုင်လိုက် …e-mailနဲ့တိုင်လိုက်…Signalကနေတိုင်လိုက်…တိုင်လို့ရသမျှနေရာပတ်တိုင်နေတာ… အရမ်းကိုအတိုင်အတောထူသူကြီးဖြစ်နေပြီ…” ဆိုပြီး သူမရဲ့ ပုံပန်းသဏ္ဍန်ကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်အောင် ရေးပြထားတာဖြစ်လို့ ပရိသတ်တွေလည်း သိရှိနိုင်အောင် ဒီသတင်းလေးကို တစ်ဆင့်ပြန်လည် ကူးယူတင်ဆက်ပေးလိုက် ရပါတယ်နော်။
Previous post စဈသား မိနျးမ တဈယောကျ ပွောပွ တဲ့ တပျတှငျး ကွုံတှနေ့ရေ တဲ့ အခွအေနေ
Next post ရှတေံဂုံ ဘုရား မှ ရှမြေား ကို ခှာယူနေ ဟု သတငျးမြား ကယျြကယျြပွနျ့ပွနျ့ ထှကျပျေါနေ